မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကျင်းပတဲ့ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကို ဒီလိုတွေ့လိုက်ရပြန်ပြီ (အပိုင်း၃) - အပြုံးပန်းဈေးခင်း
ယုံကြည်ချက်ဆိုတာ မြစ်လိုမပြတ်တမ်းစီးဆင်းပြီး သစ်ပင်ပန်းမန်းတွေလိုဝေဆာခြင်းပါပဲ!
HOMEပန်းဈေးခင်းအတွက်My Pageစည်းကမ်းများဆွေးနွေးချက်များFANSGROUPS ▼ဗုဒ္ဒဘာသာ လူငယ်အသင်းIDIOMATIC သင်ခန်းစာများနည်းပညာဘလော့များ▼ဘလော့ စည်းကမ်းများကဗျာများ▼ကဗျာ အသစ်တင်မည်MOVIESPHOTOSဓမ္မလင့်များBuddha 24/FM♥_S0NGS_♥Myanmar-Ebooks (1)▼Myanmar-Ebooks (2)▼Myanmar-Ebooks (3)HELP !Events
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကျင်းပတဲ့ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကို ဒီလိုတွေ့လိုက်ရပြန်ပြီ (အပိုင်း၃)
Posted by thuwunnaoscar on May 9, 2012 at 4:56pm
၁၃၇၄ ခုနှစ် ကဆုန် လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ Happy Vesak Day 2012
မလေးရှား နိုင်ငံ နေရာအနှံ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ဗုဒ္ဓနေ့ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် မှတ်တမ်းတင်ပုံရိပ်များ(အပိုင်း၃)
သတိပဋ္ဌာနဓမ္မရိပ်သာ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအသင်း ကွာလာလမ်ပူ မလေးရှား Views: 16
Tags: ဓါတ်ပုံ, သတင်း Like0members like this
Comment by ရာဇာထွေး on May 9, 2012 at 6:45pm အခုလိုမှတ်တမ်း တင် ပြီး ပြန်လည်တင်ပြပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘုရား...
You need to beamember of အပြုံးပန်းဈေးခင်း to add comments!
Top News · Everything အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) postedablog post""သွေးသစ္စာမပြယ်စတမ်း""သွေးသစ္စာမပြယ်စတမ်း ကဲ.. တွေးဖြစ်တာ, မတွေးဖြစ်တာ အသာထား လေးနှစ်တာတော့ ပြည့်ခဲ့ပြီ။ သူကနှုတ်ဆက်…See Moreyesterday 0
khin liked ပန်းခင်း's blog post " ကျိုးစားသင်ယူ လိုသူများအတွက် သွားတုပညာ အခြေခံ အလကား သင်ပေးမည် "Wednesdayပန်းခင်း postedablog post" ကျိုးစားသင်ယူ လိုသူများအတွက် သွားတုပညာ အခြေခံ အလကား သင်ပေးမည် "သွားတုပညာ အခြေခံ ၃လသင်တန်း အခမဲ့ သင်တန်းအောင်လျှင်လစာ ၇၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် အလုပ် ခန့် ပေးမည်။ ၃…See MoreTuesday 0
သော်သေ်ာ and alwannge joined အပြုံးပန်းဈေးခင်းTuesdayZaw Gyi postedablog postကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ရေးသူ-ဒေါက်တာစိုး )“ မိမိစေတနာ မိမိကိုယ်သာ အကျိုးပေးပါစေ ”အမေစုက လွှတ်တော်မှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့…See MoreTuesday 0
ရာဇာထွေး liked ဆောင်းနှင်းဖြူသွေး's blog post ကြက်တူရွေး၏ ပညာရေးTuesdayသော်သေ်ာ liked ပန်းခင်း's photoနယူးယောက်က မြန်မာဝတ်စုံ ဖက်ရှင်Mondayhtinlin commented on ပန်းခင်း's blog post နေ (၇)စင်းထွက်သော်"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ"May 19htinlin liked ပန်းခင်း's blog post နေ (၇)စင်းထွက်သော်May 19ပန်းခင်း postedablog postနေ (၇)စင်းထွက်သော် …See MoreMay 19 1
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) posted blog posts“ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းနှင့် တွေးမိသမျှ...ကြုံခဲ့သမျှ...လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှ”""နောက်ဆုံးသစ်ရွက်အကြို မိတ်ဆွေများသို့ တေးသံသာ""May 19ဆောင်းနှင်းဖြူသွေး postedablog postကြက်တူရွေး၏ ပညာရေးတစ်ရံရောအခါ ကြက်တူရွေးတစ်ကောင် ရှိလေသည်။ ထိုကြက်တူရွေးသည် အသိပညာမဲ့၏။ သူသည် တေးဆိုလေ့ရှိသော်လည်း…See MoreMay 18 0
ရာဇာထွေး commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post တောင်ပြာတန်းမှာ ကြွေသောပန်းများ(သို့မဟုတ်)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်စတေး၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူများ.. …"ပို့စ်လေးဖတ်လိုက်ရမှ သာသနာပြုရဟန်းတော်များ၏ ရင်နင့်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်များကို
သိရပါတယ်ဘုရား...…"May 18ရာဇာထွေး commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတစ်ခုတွင် ပြောခဲ့တဲ့ ဘာသာ ကာကွယ်ရေး စကားစု"“အဓိက…က မိန်းကလေးတွေပါ..
မြင့်မြတ်တဲ့လျှောက်လှမ်းမှုနဲ့…"May 18ရာဇာထွေး commented on ဆောင်းနှင်းဖြူသွေး's blog post သင် ဘယ်လိုလူနဲ့ အတူနေမလဲ"မှတ်သားဖွယ်ရာကောင်းလှပါတယ် ညီမလေးရေ..
နှစ်သက်မိလို့ကူးယူသွားပါတယ်…"May 18အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) posted blog postsတောင်ပြာတန်းမှာ ကြွေသောပန်းများ(သို့မဟုတ်)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်စတေး၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူများ.. …ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတစ်ခုတွင် ပြောခဲ့တဲ့ ဘာသာ ကာကွယ်ရေး စကားစုMay 16 More... RSS
Posted by အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) on May 23, 2013 at 7:34pm0Comments
Posted by ပန်းခင်း on May 22, 2013 at 12:32am0Comments
Posted by Zaw Gyi on May 19, 2013 at 4:42pm0Comments
Posted by ပန်းခင်း on May 19, 2013 at 1:12am 1 Comment
Posted by အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) on May 19, 2013 at 12:00am0Comments
""နောက်ဆုံးသစ်ရွက်အကြို မိတ်ဆွေများသို့ တေးသံသာ""
Posted by အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) on May 18, 2013 at 7:49am0Comments
Posted by ဆောင်းနှင်းဖြူသွေး on May 18, 2013 at 2:27am0Comments
Posted by အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) on May 16, 2013 at 6:41pm 1 Comment
ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတစ်ခုတွင် ပြောခဲ့တဲ့ ဘာသာ ကာကွယ်ရေး စကားစု
Posted by အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) on May 16, 2013 at 3:09am 1 Comment
သင် ဘယ်လိုလူနဲ့ အတူနေမလဲ
Posted by ဆောင်းနှင်းဖြူသွေး on May 14, 2013 at 2:14am2Comments
Posted by အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) on May 12, 2013 at 10:14pm2Comments
ဆန်းကြယ်သော ကံတရား နှင့် ဇဋိလ
Posted by ပန်းခင်း on May 12, 2013 at 1:47am0Comments
ငွေကျပ် ၄၅ သိန်း ကျော် ချီးမြှင့်မည့် “ Shwe Nann Taw Photo Model Challenge ” ပြိုင်ပွဲကြီး
Posted by ပန်းခင်း on May 12, 2013 at 1:21am0Comments
Posted by ပန်းခင်း on May 10, 2013 at 2:00am0Comments
Posted by ကောင်းဆက်လင်း on May 7, 2013 at 2:52pm0Comments
မေလ ၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်၌ Samsung Galaxy S4 စတင် ရောင်းချသည့်နေ့ နံနက်ပိုင်း၌ပင် အလုံးရေ ၁ဝဝဝ ချက်ခြင်းကုန်
Posted by ပန်းခင်း on May 4, 2013 at 2:22pm0Comments
ဂန်းနန်းစတိုင် အကဖြင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သော ကိုးရီးယား အဆိုတော် PSY မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်ရန် ကြိုးပမ်း
Posted by ပန်းခင်း on May 4, 2013 at 2:04pm0Comments
Posted by ဆောင်းနှင်းဖြူသွေး on May 4, 2013 at 12:03am0Comments
မမုန်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် မချစ်လည်း မချစ်ပါဘူး
Posted by ပန်းခင်း on May 1, 2013 at 1:10pm0Comments
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိထားသင့်သော ဘာသာခြားတစ်ယောက်က ဆရာတော် ( မေတ္တာရှင် ရွှေပြည်သာ ) အား မေးလာသောမေးခွန်းတစ်ခု
Posted by ပန်းခင်း on April 29, 2013 at 11:54pm0Comments
View All Plz support US if u "LIKE" အပြုံးပန်းဈေးခင်း*
Mobile Technology for iOS
ယနေ့ရောက်လာ မိတ်သဟာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
© 2013 Created by ပန်းခင်း. Badges | Report an Issue | Terms of Service